Buug-yaraha Waalidka / Ardayga Minnewashta | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Kusoo dhawow Qoysaska Minnetonka!
Buug-gacmeedkani waxaa loogu talagalay inuu noqdo dukumenti nool. Bogagga badankood, waxaad ka heli doontaa waxyaabo hoosta laga xarriiqay, kuwaas oo bixiya xiriiriyeyaal faahfaahin dheeraad ah boggayaga internetka. Waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiinta iyo ardayda inay soo booqdaan markay su'aal soo baxaan. Macluumaadka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa. Sidoo kale, haddii aadan awoodin inaad hesho macluumaad, fadlan ka wac Xafiiska Xiriirka Degdega ee 952-401-5095 si aan had iyo jeer u sii wanaajino faa'iidada ilahaan.
Marka lagu daro macluumaad muhiim ah oo loogu talagalay waalidiinta, waxaan ku jirnaa qayb ku saabsan Xuquuqda iyo Waajibaadka Ardayga. Waxaa muhiim u ah ardayda iyo waalidiinta labadaba inay ka warqabaan siyaasadaha qaaska ah ee dejinaya habdhaqanka degmada dhaqankeeda iyo ciqaabta edbinta ee ardayda. Dhamaan shuruucda gudoonka waxbarashadu waxay ku yaalliin websaydhka degmada oo ku hoos yaal mareegta Maamulka.
Xiriirka u dhexeeya shaqaalaha dugsiga iyo waalidiinta waa mudnaan sare. Markay qoysaska iyo iskuulada ka shaqeeyaan iskaashi, fursadaha ardayda waa mid aan dhamaaneyn. Waxaan soo saarnay dhowr dariiq oo loogu talagalay wada xiriirka cad iyo xushmadda leh, oo ay kujiraan guryo furan, habeen-dugsi-barid, shirar waalid-macalin, fursado iskaa wax u qabso ah, goleyaal latalin, emayl cod, e-mayl, bogag internet, galaangalka khadka tooska ah ee diiwaanada ardayda. iyo inbadan. Waxaa naga go'an inaan si joogto ah ula xiriirno oo aan ula shaqeyno si dhow annaga oo taageeraya guusha cunuggaaga. Waxaan rajeynayaa in adiga iyo reerkaagaba idinka iyo qoyskiinnaba guul iyo rayn rayn ku gaarta waxbarashadda sanadkan ee iskuulada Minnetonka!
Soo degso Buugga Waalidka / Ardayga